Ezona ndidi zisetyenzisiweyo zephepha lokuprinta | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iindidi zephepha lokuprinta
Encarni Arcoya | | Izibonelelo
Ukuba sikubuze ngokwahlukileyo iintlobo zephepha zokuprinta, Eyona nto isengqiqweni kukuba into yokuqala ethi qatha engqondweni liphepha oliprinta ekhaya, oko kukuthi, i-A4 emalunga nama-80 eegram, eyinto eqhelekileyo leyo. Nangona kunjalo, kwi-graphic medium kukho iintlobo ezininzi ngokuxhomekeke kwinto ofuna ukuyiprinta, ukusuka kwe-thinnest, ukuya kwezityebileyo, kunye nezinye izinto ezahlukeneyo.
Ngaba wakha wazibuza ukuba zeziphi iintlobo zephepha ezikhoyo? Kwaye bahlelwa njani? Emva koko siza kuthetha ngayo yonke le nto ukuze ube nokuqikelela kwesi sihloko.
1 Yintoni iphepha
2 Iindidi zephepha lokuprinta: izinto ezibalulekileyo
2.1 Ubunzima bephepha
2.2 Ubume bephepha
3 Iindidi zephepha lokuprinta
3.1 Iphepha camera
3.2 Iphepha leCouché
3.3 Iphepha elimakishiweyo
3.5 Iphepha lezendalo
3.6 Iphepha lokulinganisa
3.7 Iphepha elihlaziyiweyo
3.8 Iphepha elizimeleyo
3.9 Iphepha lokuyila
3.10 Iphepha leBond
3.11 Iphepha leBristol
Iphepha yinto ezenziwe yimicu yemifuno edibeneyo. Inkqubo iquka ukumisa imicu emanzini ukuze ikhuphe njengoko yomile.
Kuxhomekeka kwizinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo, ukugqiba, ubunzima, isicelo ... iintlobo ezahlukeneyo zamaphepha ziyafumaneka. Nangona kunjalo, kwimeko yeentlobo zamaphepha okushicilela, kufuneka kuthiwe zahluke kakhulu kunezinye izinto ezisetyenziswayo.
Iindidi zephepha lokuprinta: izinto ezibalulekileyo
Ngaphambi kokuba uthethe ngamaphepha ahlukeneyo okushicilela akhoyo, kubalulekile ukuba wazi imiba emibini eyahlula omnye komnye: ubunzima, ubunjani kunye nokugqitywa kwephepha.
Obu bubunzima ngeemitha zesikwere sephepha, into eyahluke mpela kubunzima bephepha. Kukhetho olubaluleke kakhulu kuba ukuba uprinta ubunzima obungachanekanga, isiphumo sokugqibela seprojekthi yakho singonakaliswa. Ke ngoko, kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyiprinta, Uya kuba neigrama ezahlukeneyo:
I-40 ukuya kwi-60 gram: isetyenziswa ngamaphephandaba.
Ukusuka kwi-80 ukuya kwi-100 yeegram: yeyona uyisebenzisayo eofisini, ekhaya, njl. Yeyona ixhaphakileyo neyaziwayo.
I-90 ukuya kwi-170: yenzelwe ikakhulu iincwadana kunye / okanye iiposta.
I-200-250 gr: eqhelekileyo kwiimagazini okanye kwiiflaya.
Ukusuka kuma-250 ukuya kuma-350 gr: uyakube 'uzive' kumakhadi oshishino okanye kwiiposikhadi. Iyaxhathisa ngakumbi ukugoba.
I-350-450 gr: sithetha phantse ikhadibhodi, esetyenziselwa amaqweqwe encwadi kunye nokunye okunjalo.
Umdwebo ubhekisa kwimvakalelo yelo phepha. Umzekelo, iphepha linokuba rhabaxa, okanye ingqolowa erhabaxa, HAYI (oko kuthetha ukuba kucinezelwe ukubanda), okanye i-HP (ishushu icinezelwe).
Ngokusekwe kubume, unokufumana iintlobo ezahlukeneyo bathanda:
Iphepha eligutyungelweyo: elisetyenziswa yimagazini, iincwadana, njl.
Iphepha elikhutshelweyo: lelona ulisebenzisa rhoqo, ekhaya naseofisini. Kukwincwadi, iincwadana, njl.
Kubekwe: liphepha elirhabaxa kodwa ngokulinganayo.
Indawo yokwaluka: emdaka, uya kubona iinkcukacha zefayibha.
Ushicilelo lweendaba: ikwabizwa ngokuba yiphepha lendaba, liphepha le-pulp.
Njengesipho: 'oyinyani' unobunzima beegram ezili-100 kunye nokugqitywa okucwebezelayo.
Ukugqiba kubhekisa kwindlela elibonakala ngayo iphepha. Ihlala isekwe ekwazini ukuba ukugqitywa kuyabengezela (shiny) o hayi (iqabane). Ngasinye sisetyenziselwa usetyenziso olwahlukileyo. Umzekelo, ukugqitywa kwe-matte kusetyenziswa kwiincwadi zamaphepha angaphakathi; ngelixa i-glitter isetyenziswa ikakhulu kwizigqumathelo zangaphambili nangasemva ukwenza imibala ibonakale.
Kwaye ngoku, siza kuthetha nawe malunga neendidi zephepha lokuprinta. Nangona kunjalo, ukukuxelela ngazo zonke iindlela onokukhetha kuzo kuya kuba lide kakhulu. Ngesi sizathu, siza kugxila kwezona ziqhelekileyo nezaziwayo ukuba sikuxelele kancinci malunga nenye yazo.
Inesiphelo esigudileyo nesicwebezelayo, nangona inokuba matte. Ngaba enye Ikhethelwe amaphephancwadi, amakhadi oshishino, iincwadana ezinemifanekiso, kunye nayiphi na iprojekthi ebonakalayo efuna umphumo wombala olungileyo.
Ibonakaliswa ngokuba incinci encinci, oko kuthetha ukuba i-inki ayingeni kakhulu ephepheni, kwaye umbala wakha phezu komhlaba. Kwenza ntoni oko? Ewe, yenza ukubetha ngakumbi.
Ungayifumana kwi-glossy kunye ne-matte.
Kule meko sithetha ngephepha elibonakaliswe kukukhululeka ngaphezulu. Imizekelo yale ndima yile ebekiwe, ebhalwe emboss okanye ngomatshini.
Eli phepha, lifumaneka nge-125 kunye ne-225 gram, inomphetho ogudileyo kunye nokugudileyo, okumgangatho ophezulu kuba umhlophe umhlophe kakhulu kwaye wenza imibala ihlale ngokugqibeleleyo (ide ibalaselise).
Yeyona ivela Amahlathi aqinisekisiweyo e-FSC.
Ngaba yenye yezona zininzi eyaziwa ngokuba yi-porosity ephezulu, eyenza ukuba ifunxe inki kakuhle. Inomphetho omenyezelayo kunye nowe-matte (owokugqibela ulungele ukufunda izicatshulwa ezinkulu kuwo).
Ekuphela kwento embi kukuba imibala, xa ifunxa i-inki, ijongeka ngathi ithambile.
Le inegrama encinci, kuba isuka kwi-60 kuye kwi-100 yeegram. Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona, umbala wayo awusoloko umhlophe, kodwa uthulisiwe ngakumbi, nangona benokusebenzisa izinto ukuyenza mhlophe.
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zephepha lokushicilela, eli libonakaliswa ngokuba necala elinye kunye neteyipu yeglu. Ke ngoko, iprintwe kuphela kwelinye icala kwaye isebenza, isusa iphepha elikhuselayo kwelinye, ukuze ulincamathele kwiindawo ezahlukeneyo.
Luhlobo lwephepha elinobunzima obahlukeneyo kunye noburhabaxa, kunye nobukhulu. Ijolise kuyo iiprojekthi zesisombululo esiphezulu, abafuna ukudlulisa imvakalelo kuyilo lwabo. Ke ngoko, kuyinto eqhelekileyo ukuyibona kwizimemo, amakhadi oshishino, iiflaya, iiposta ...
Eli phepha linobunzima obuqhelekileyo ngesiqhelo, ukuba mhlophe nyulu, kodwa kukwakho nemibala. Kumakhaya amaninzi le ndima ixhaphakile ukuba nayo ekhaya.
Eli phepha laziwa ngcono njengephepha "lekhadikhadi". Liliphepha into enzima kunephepha, ihlala inombala, kodwa ibumbeke kakhulu, njengoko ivumela ukugoba, ukusika, njl.
Njengoko ubona, zininzi iintlobo zephepha lokuprinta. Eyona ngcebiso sinokukunika yona kwimeko yakho kukuba, xa ushicilela, buza ukuba yeyiphi eyona nto unokukhetha kuyo kuxhomekeke kuhlobo lweprojekthi onayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iindidi zephepha lokuprinta
Iziguquli ezi-5 eziphambili zeleta
Ungalususa njani ukhuseleko kwiPDF